Hisorohana ny halatra : hamarinina ny mizàna fandanjana | NewsMada
Hisorohana ny halatra : hamarinina ny mizàna fandanjana
Efa fanao! Mila hamarinin’ny sampandraharahan’ny fandrefesana ara-dalàna (SML) isaky ny fotoana voafetra ny mizàna ampiasain’ny mpivarotra sy ny mpividy vokatra. Etsy Soarano ny foiben’ny SML, eo ambany fiahin’ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana. Hamarinina isan-taona ny mizànan’ireo mpivarotra manakaiky ny SML ary isaky ny roa taona ho an’ireo lavitra.
Midina an-toerana anefa ity sampandraharaha ity, mba tsy hanahirana ireo manan-draharaha aminy. Amin’ity taona 2016 ity, idinana ifotony ny faritra telo, toy ny faritra Itasy, distrika Ambohidratrimo, ary distrika Ankazobe sy Anjozorobe.
Naharitra iray volana ny fanamarinana tany Itasy, nifarana ny 31 jolay teo. Nahatratra 509 ny fiantsoana nalefa tany amin’ny toerana dimy (Soavinandriana, Analavory, Soavinandriana, Arivonimamo, Miarinarivo), ka namaly ny antso ny 493.
Hogiazana ny mizànan’ireo tsy mamaly ny antso
Tany Imerintsiatosika, tsy tong any 40%-n’ireo natsoina raha tonga avokoa ny 100% tany amin’ny toeran-kafa. Nahatratra 2.411 ny mizàna voamarina. Haverina antsoina ireo tsy tonga ary miafara amin’ny fanagaziana ny mizanany ho an’ireo tsy mety tonga.
Hanomboka amin’ny 9 aogositra hatramin’ny 2 septambra ny any amin’ny distrika Ambohidratrimo (Mahitsy, Ambohidratrimo, Talatamaty, Ivato, Ambohitrimanjaka), ary amin’ny volana oktobra kosa ny any Anjozorobe sy Ankazobe.